အဆိုပါ monoamine တည်ငြိမ်မှု (-) - OSU6162 ရေရှည်သောက်သုံး Wistar ကြွက် (2015) ၏နျူကလိယထဲမှာနျလြှောကျ dopamine output ကိုတန်ပြန် - သင်၏ ဦး နှောက် On Porn
အဆိုပါ monoamine stabilizer (-) - OSU6162 (2015) Wistar ကြွက်များမသောက်ရေရှည်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် downregulated dopamine output ကို counteracts
Kristin Feltmann1, †, Ida Fredriksson1, †, Malin Wirf1, BjörnSchilström2,3 နှင့်ပီ Steensland1, *
အပိုဒ်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းထုတ်ဝေ: 14 Oct 2015
Doi: 10.1111 / adb.12304
ကျနော်တို့မကြာသေးမီက monoamine တည်ငြိမ် (-) - OSU6162 (OSU6162) သည်နျူကလိယအတွက်အရက် - သွေးဆောင် dopamine output ကိုမှုန်ဝါးနေစဉ်ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်များတွင်အရက်စားသုံးမှုနှင့် cue / prim- သွေးဆောင်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအပါအဝင်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက် -mediated အပြုအမူ, လျော့နည်းသွားကြောင်းတည်ထောင်ခဲ့သည် အရက် - na NAve ကြွက်၏ accumbens (NAc) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် OSU6162 သည်အရက်၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကိုအားနည်းစေခြင်းဖြင့်အရက်သောက်ခြင်းဖြင့်ပြုမူသောအပြုအမူများကိုလျော့ပါးစေသည်ဟုယူဆခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည်သောက်သုံးမှုနှင့် OSU6162 ကုသမှု (၃၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ sc) အပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်အရက် - သွေးဆောင်မှု (၂.၅ ဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ ip) Wistar ကြွက်များတွင် ၁၀ လကြာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသွားပြီးနောက် Wistar ကြွက်များတွင် NAc dopamine ရလဒ်များအပေါ်အကဲဖြတ်သည်။ % အရက်။ ရလဒ်များအရ Basal နှင့်အရက် - သွေးဆောင် NAc dopamine ရလဒ်များသည်ရေရှည်သောက်သုံးသည့်ကြွက်များတွင်အရက် - na rve ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့သည်။ ရေရှည်သောက်သုံးသည့်ကြွက်များတွင် OSU30 သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပြီး dopamine ထွက်ရှိမှုကိုအနည်းဆုံး ၄ နာရီခန့်သိသိသာသာမြင့်တက်စေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် OSU2.5 ကြိုတင်ကုသမှုသည်ရေရှည်သောက်သုံးသည့်ကြွက်များတွင်အရက်သောက်ခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသည့်ရလဒ်များကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်အရက် - naïveကြွက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ရလဒ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့် OSU10 သည်ရေရှည်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်းမရှိသောကြွက်များတွင် OSU20 တွင်အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိမရှိကြောင်းညွှန်းဆိုထားသည်။ CPP ၏ရလဒ်များသည်မှတ်ဉာဏ်ရယူခြင်းချို့ယွင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် OSU6162 သည်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုမထိခိုက်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ဤရလဒ်များအရ OSU4 သည်ရေရှည်အရက်သောက်ကြွက်များတွင် NAc dopamine လိုငွေပြမှုကို တန်ပြန်၍ အရက် -mediated အပြုအမူများကိုလျော့ပါးစေပြီး OSU6162 သည်သူ့အလိုလိုအကျိုးမပြုကြောင်းဖော်ပြသည်။ OSU6162 ၏အကျိုးရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူ OSU6162 ၏လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအတူတကွလေ့လာခြင်းသည်အရက်ကိုမှီခိုနေသည့်လူနာများတွင်အရက်အသုံးပြုမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါ (AUD) ရောဂါ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (Rehm မှပံ့ပိုးသိသိသာသာရောဂါ relapsing တစ်နာတာရှည်ဖြစ်ပါသည် et al. 2009) ။ အနည်းငယ်ရရှိနိုင်ဆေးများ၏ကန့်သတ်လက်တွေ့ထိရောက်မှု (Anton et al. 2006) ပိုကောင်းတဲ့ကုသမှုများအတွက်အလွန်အရေးပါလိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်ကတဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှကုသမှုပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရက်အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက် (Di Chiara နှင့် Imperato ၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေး (NAc) တိုးပွါး 1988) နှင့်ကျန်းမာဘာသာရပ်များ (Boileau et al. 2003သက်ရောက်မှု (Tupala နှင့် Tiihonen အားဖြည့်) နှင့်အားဖြင့်သွေးဆောင် 2004) ။ သို့သော် AUD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏ striatum မှာတော့နှစ်ဦးစလုံး dopamine D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ (Hietala et al. 1994; Volkow et al. 1996) နှင့်ဗဟိုလှုံ့ဆော်-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရေး (Martinez လျှော့ချနေကြသည် et al. 2005; Volkow et al. 2007) ။ ဤရွေ့ကားအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ဒိုင်ယာနာ (အရက်တဏှာမောင်း compulsive သောက်သုံးရေနှင့် relapse များ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ဖို့အကြံပြုခဲ့ကြ 2011) ။ တကယ်တော့တဏှာပြင်းထန်မှုတစ်ဦးလျှင်မြန် dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် (Kumakura ဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့အကြံပြုထားသည် et al. 2013) နှင့် detoxified အရက်-မှီခိုလူနာများ၏ striatum တစ်လျှော့ချ D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ (Heinz et al. 2004). outbred ကြွက်များတွင်သို့သော်နာတာရှည်အရက်ကုသမှုအပြီးတွင် mesolimbic dopamine system ပေါ်တွင်သက်ရောက်မှုကိုက်ညီမှုရှိပါတယ် (Tupala နှင့် Tiihonen 2004). ထိုအကှာဟတဖြစ်နိုင်သောရှင်းပြချက်ယနေ့အထိအများဆုံး preclinical လေ့လာမှုများလူ့ AUD ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုဖို့လျှောက်လွှာတွင်သံသယ ချ. , အစမ်းသပ်မှုသို့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် artifice ၏ Element တစ်ခုရဲ့မိတ်ဆက်ပေးသောအတင်းအဓမ္မအရက်သေစာအုပ်ချုပ်ရေး, ကိုအသုံးပြုပြီဖြစ်နိုင်ပါသည်. မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့ preclinical ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း-access ကို 20% အီသနော Two-ပုလင်း-ရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (IA20E) ပြန်လည်ထိတွေ့ပေါ်လွင်လာ (ပညာရှိ 1973; Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်း et al. 2008), ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမကျြနှာကိုတရားဝင်မှုနှင့်တစ်ဦး AUD ပရိုဖိုင် (Carnicella အတော်ကြာထူးခြားချက်ပြသရာ et al. 2014မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သောက်၏ (1) တင်းမာမှု;) အောက်ပါတို့အပါအဝင် အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းနှင့် abstinence ၏ (2) သံသရာ; (3) pharmacologically သက်ဆိုင်ရာတို့၏အသွေးအရက်ပြင်းအား (Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်း et al. 2008); နှင့် (4) compulsive သောက်သုံးရေ (Hopf et al., 2010) ။ ထို့အပြင် IA20E မော်ဒယ် (အနည်းဆုံးလက်ရှိ AUD ဆေးဝါးများ၏ဖြစ်ရပ်အဘို့, Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တရားဝင်မှုပြသခဲ့သည် et al. 2008) နှင့် varenicline (Steensland et al. 2007; Litten et al. 2013) ။ T ကသူ IA20E မော်ဒယ်ကိုလည်း AUD ၏နားလည်မှုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာ neuroadaptations induces iအဆိုပါ medial prefrontal cortex အတွက် dysregulated glutamatergic neurotransmission ncluding (Fredriksson et al. 2015). ထို့အပွငျ IA7E ၏ 20 ရက်သတ္တပတ် NAc dopamine output ကိုလျော့နည်းစေ (ဗာရ et al. 2011), s ကိုနာတာရှည်အရက်သောက် AUD အတွက် hypo-functioning dopamine ပြည်နယ် induces သောအယူအဆ upporting (ဒိုင်ယာနာ 2011; Becker ကနှင့် Mulholland 2014) ။ သို့သော် dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အဆင့်ဆင့်ယခင်က Jonsson (2 နှင့်4လအကြာ, အသက်-လိုက်ဖက်အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်အောက်ပိုင်းဖြစ်ပြ, ဒါပေမယ့်လအတွင်း 10 မဟုတ်, မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှုပြီ et al. 2014) ။ ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန် microdialysis လေ့လာမှု Basal နှင့်အရက်-သွေးဆောင် NAc dopamine ရလဒ်အပေါ် IA20E ဆယ်လဆိုးကျိုးများနောက်ထပ် dopamine system ပေါ်တွင်ရေရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သုံးစွဲမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနားလည်ရန်စုံစမ်းစစ်ဆေး။
AUD (Tupala နှင့် Tiihonen ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် dopamine စနစ်၏အရေးပါမှုနေသော်လည်း 2004), AUD လူနာအတွက်ရိုးရာ dopamine D2 ရန်နှင့် agonists နှင့်အတူလေ့လာမှုများတားပြီ (ဆွစ်ဖ် 2010) ။ သို့သော် modafinil (က dopamine Transporter modulator တွေကို) နှင့် aripiprazole (ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း D2 agonist) နဲ့မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများအရက်-မှီခိုလူနာအတွက်အလားအလာရလဒ်များကိုပြသ (Brunetti et al. 2012; Joos et al. 2013) ။ ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးကုသမှုပိတ်ဆို့ထားခြင်းသို့မဟုတ် activation အပေါ်မှီခိုပေမယ့်အစားတစ်ဦးမော်ဂျူဒါမှမဟုတ် dopaminergic စနစ်၏ '' တည်ငြိမ် '' မည်မဟုတ်ပါ။
(-) - OSU6162 (OSU6162) ဖွံ့ဖြိုးပြီးသည့်အခါရေပန်းစား dopaminergic သေံပေါ် မူတည်. dopamine-related အပြုအမူတွေကိုတားစီးသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံပြီး '' dopamine တည်ငြိမ်စေ '' အမည်ရှိခဲ့ပေါင်းများကိုတစ်လူတန်းစားပိုင် (Sonesson et al. 1994; တဘက်တချက် et al. 2008) ။ OSU6162 သည်ဆေးခန်းတွင်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးလေဖြတ်ခြင်းနှင့် ဦး နှောက်စိတ်ဒဏ်ရာများဖြစ်ပြီးနောက်ဟင့်တန်တန်ရောဂါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းကဲ့သို့သောအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများစွာအတွက်အကဲဖြတ်ထားသည်။ et al. 2012; Kloberg et al. 2014). စသည်တို့အတွက် လေ့လာမှုများ OSU6162, aripiprazole ကဲ့သို့ D2 receptors မှာအနိမ့်အခ်ါလှုပ်ရှားမှုနဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist အဖြစ်ပြုမူကြောင်းညွှန်ပြ (Seeman နှင့်ဂွမ် 2007; Kara- et al. 2010); သို့သော်အမူအကျင့်လေ့လာမှုများ OSU6162 (Sonesson မဆိုအခ်ါလှုပ်ရှားမှုသရုပ်ပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြ et al. 1994; Natesan et al. 2006), တစ်ဦးဂန္တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist ၏ထက်ကွဲပြားခြားနားသောယန္တရားကိုညွှန်း။ ငါnstead ကြောင့် OSU6162 အများစု presynaptic D2 receptors မှာရန်အဖြစ်ပြုမူသည်ဟုတွေးဆထားသည် (Carlsson et al. 2004). သို့သော်မကြာသေးမီကလေ့လာတွေ့ရှိချက် OSU6162 ကိုလည်းကောင်းစွာယင်း၏တည်ငြိမ်ဂုဏ်သတ္တိများအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအရာ, အထူးသ 5-hydroxytryptamine 2A receptors, serotonergic အပေါ်တစ်ဦးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist အဖြစ်ပြုမူကွောငျးတငျပွ (Carlsson et al. 2011) နှင့် '' monoamine တည်ငြိမ်စေ '' ဒြပ်ပေါင်းများ၏ဤလူတန်းစားများအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်သောအမည်ဖြင့်ဖြစ်အံ့သောငှါဖော်ပြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာလူသားတစ်ဦးဦးနှောက်-ပုံရိပ်လေ့လာမှု (Tolboom et al. 2015) OSU6162 သည် ventral striatum (NAc) အပါအ ၀ င် striatum တွင် D2 / D3 အဲဒီ receptor များရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို - မှီခိုနေကြောင်းပြသခဲ့သည်, OSU6162 ၏အလားအလာကိုမီးမောင်းထိုးပြ AUD နှင့်ချိတ်ဆက်သည်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် OSU6162 ကိုရေရှည်သောက်သုံးသည့်ကြွက်များတွင်စေတနာအလျောက်သောက်သုံးခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ cue / priming-induced ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းကဲ့သို့သောလက္ခဏာများကိုလျှော့ချကြောင်းပြသခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီက OSUXNUMX ကို AUD ဆေးတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ et al. 2012) ။ ကျနော်တို့နောက်ထပ် OSU6162 အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်များတွင်စနစ်တကျအရက်စိန်ခေါ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်သည့် dopamine output ကို (Steensland ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေကြောင်းတွေ့ရှိရ et al. 2012), တစ် ဦး စူးရှသော dopamine မြင့်တက်တန်ပြန်ဖို့ OSU6162 ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ထို့အပြင် OSU6162 သည်အရက်သေစာမပါသောကြွက်များ (Basensland) အတွင်းအခြေခံအခြေအနေများတွင် NAc dopamine ထွက်ရှိမှုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ et al. 2012အလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ယူမှုများအတွက်အလားအလာညွှန်ပြနိုင်သည့်), ။ ယခုလေ့လာမှုသည် OSU6162 ၏အလားအလာနောက်ကွယ်ရှိယန္တရားကို AUD ဆေးအဖြစ်ထပ်မံအကဲဖြတ်သည်။ ပထမတစ်ခုအနေဖြင့် OSU6162 ၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုတည်းနှင့်အရက်စိန်ခေါ်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်ကာ NAc dopamine output ကို IA10E ၁၀ လပြီးနောက်နိုးထသည့်ကြွက်များတွင် microdialysis ကို အသုံးပြု၍ စုံစမ်းခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ OSU20 ၏အကျိုးရှိသောဂုဏ်သတ္တိများကို conditioned place preference (CPP) ကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်မှတ်ဥာဏ်ရယူခြင်းသည် CPP ကိုတည်ထောင်ရန်အထောက်အကူပြုသောကြောင့် OSU6162 ၏ ၀ တ္ထုဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုမှု (NOR) အပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
တိရစ္ဆာန်များ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် [အထီး Rcc Wistar ဟန်သည်အထိ (Harlan, နယ်သာလန်)], အိုးအိမ်အခြေအနေများ, ပု IA20E-အရက်သောက်ပါရာဒိုင်း (ပညာရှိ 1973; Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်း et al. 2008) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဓာတုပစ္စည်းအဆိုပါအကူအညီပေးရေးသတင်းအချက်အလက် (SI) တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အားလုံးစမ်းသပ်ချက်ဆှီဒငျတိရိစ္ဆာန်လူမှုဖူလုံရေးအက်ဥပဒေအတွက်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူတင်းကျပ်သောအညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်များနှင့်စတော့ဟုမ်းအတွက်တိရိစ္ဆာန်သုတေသနအပေါ်ဆွီဒင် Ethical ကော်မတီအတည်ပြုခဲ့ကြသည် (Dnr: N475 / 12 နှင့် N64 / 12) ။
Vivo အတွက် microdialysis
Microdialysis မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှု (IA10E ၏ 20 လအကြာကြွက်များ၏ NAc အတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်; n = 44) နှင့်အသက်အရွယ် - လိုက်ဖက်အရက် - na -ve ကြွက်များတွင် (n = 8) dopamine နှင့်၎င်း၏ metabolites 2.5-dihydroxyphenylacetic အက်ဆစ် (DOPAC) နှင့် homovanillic acid (HVA) ၏ Basal နှင့်အရက် - သွေးဆောင် (3,4 ဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) ၏ရလဒ်များကိုတိုင်းတာရန်။ ရေရှည်သောက်သုံးသည့်ကြွက်များကို OSU6162 (30 mg / kg, sc) တစ်ခုတည်းနှင့် NAc dopamine အပေါ်အရက် (2.5 g ethanol / kg, ip) နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးကုသမှုအုပ်စုလေးစု ခွဲ၍ ထပ်မံခွဲခြားခဲ့သည်။ DOPAC နှင့် HVA output အဆင့်များ။ အဆိုပါ OSU6162 ထိုးအရက် -mediated အပြုအမူတွေကို (Steensland) attenuating အတွက်ထိရောက်မှုကိုပြသသည်ယခင်ရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံခဲ့သည် et al. 2012), နှင့်ထိုးဆေးအကြား 60 မိနစ်ကြားကာလဟာ OSU6162-သွေးဆောင် dopamine output ကိုဒုတိယဆေးထိုး (Steensland ရှေ့တော်၌အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခွင့်ပြုပါရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည် et al. 2012) ။ အဆိုပါအရက်ထိုးသည့်နိုးကြွက်၏ NAc (Lido အတွက် microdialysis လျှောက်ထားယခင်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံခဲ့ပါတယ် et al. 2009; Steensland et al. 2012).
ယခင်က (Schilströmဖော်ပြထားသကဲ့သို့ခွဲစိတ်ကုသဖျော်ဖြေခဲ့သည် et al. 1998; Steensland et al. 2012); သို့သော် isoflurane မေ့ဆေးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့အာရုံစူးစိုက်မှု Dialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး (Malmlöfဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည် et al. 2015) တစ်ဦး 2.25-မီလီမီတာတက်ကြွအမြှေးပါး (Filtral 10 AN69, Hospal, Meyzieu, ပြင်သစ်) နဲ့နှင့် bregma နှင့်အီရတ်တွင် mater မှဆွေမျိုး AP + 1.6, ML -1.1 နှင့် DV -8.2 မီလီမီတာမှာညာဘက် NAc ထဲထညျ့ (Paxinos ၏ Atlas နှင့် Watson ဟာ 2007) ။ အဆိုပါကြွက်များမေ့ဆေးထံမှ awoken ခဲ့သောနှစ်နာရီအကြာတွင်သူတို့ IA20E ၏တဦးတည်းသံသရာ (ရေအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှု၏ဆိုလိုသည်မှာ 24 နာရီ,) အားဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။
21 NaCl, 48 KCl, 2.5 CaCl: Dialysis (ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ဆိုလိုသည်မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 147 နာရီ) 3.0 နာရီနောက်ဆုံးအရက်-အရက်သောက် session ရဲ့အဆုံးအပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အစပျိုးခဲ့သည် perfusion ခြင်းဖြင့်ဇီဝကမ္မ perfusion ဖြေရှင်းချက် (မီလီမီတာနှင့်အတူ (1.3 / မိနစ်μl)2, 1 MgCl, 1.0 NaHPO4; သော pH = 7.4) ။ ပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်2နာရီ, dialysate နမူနာ 15-μl 5-မီတာ Perchloric acid တို / 0.5-μm ethylenediaminetetraacetic အက်ဆစ် (EDTA) ပါဝင်တဲ့ပြွန်သို့ 1.76 မိနစ်ကြားကာလမှာကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ OSU45 (6162 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, SC) သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ် (ဆား) အုပ်ချုပ်ခင် baseline နမူနာ 30 မိနစ်စဉ်အတွင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ခြောက်ဆယ်မိနစ်ခန့်အကြာတွင်ကြွက်တစ်ဦးအရက်၏ဆေးထိုး (2.5 g / ကီလိုဂရမ်, ip) သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ် (ဆား) ပေးခဲ့နှင့်နမူနာတစ်ခုအပိုဆောင်း 180 မိနစ်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ Dialysis နမူနာချက်ချင်း,4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှဆင်းအအေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်အထိယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ high-performance ကိုအရည် Chromatography (HPLC) ကို အသုံးပြု. -20 ° C မှရေခဲသေတ္တာသည်တစ်နာရီလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားပေမယ့်လက်စွဲနမူနာထိုး (Steensland နှင့်အတူခဲ့ကြသည် et al. 2012).
HPLC စဉ်အတွင်းမိုဘိုင်းအဆင့် (55 မီလီမီတာ acetate, 10-12% Methanol, 0.1 မီလီမီတာ octanesulfonic အက်ဆစ်, 0.01 မီလီမီတာ Na2EDTA; သော pH = 4.1) သိပ်သည်း core ကိုအမှုန် (Kinetex 0.8 × 18 မီလီမီတာ, 150 μm, Phenomenex, Torrance,, CA, USA) နဲ့ C-4.6 ကော်လံမှတဆင့်) (2.6 ml / မိနစ် pumped ခဲ့သည်။ ကော်လံအပေါ်ခွဲခြာ, dopamine ပြီးနောက် DOPAC နှင့် HVA electrochemical 400 MV တစ်ဦးဓာတ်အလားအလာများနှင့် -200 MV တစ်လျှော့ချအလားအလာမှာ ESA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆဲလ် (Thermo သိပ္ပံ, Waltham MA, USA) ကို အသုံးပြု. ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်နှင့်ပြင်းအားများက quantified ခဲ့ကြသည် ပြင်ပစံချိန်စံညွှန်းများ (TotalChrom ဆော့ဖ်ဝဲ, PerkinElmer, Waltham, MA, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နှင့်အထွတ်အထိပ်ဒေသများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားကြားနေအနီရောင်နှင့်အတူစွန်း 50-μmအပိုင်းအလင်း microscopy, သုံးပြီးမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်းခုနှစ်, 16 ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်၏ 44 (ဘာလို့လဲဆိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရွှေ့ပြောင်းခံရ၏ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်n = ၅) သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသမှုတွင်နည်းပညာအခက်အခဲများ (n ကျောက်ကပ်ဆေးကြောခြင်း (= ၂)n = 6) နှင့် HPLC ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (n = 3) ။ အကြွင်းမဲ့ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအကဲဖြတ်မရသောကြောင့်ကြွက်တစ်ကောင်သည် Basal output (fmol) နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ သို့သော်ဆွေမျိုးအပြောင်းအလဲများကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးဒေတာများကိုအခြေခံပြောင်းလဲမှု၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တင်ပြသည့်အခါဤကြွက်ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အရက် - na groupve အုပ်စုတွင် (n = 8), တစ် ဦး ကြွက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရွှေ့ပြောင်းခံရ၏ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ အခြေခံနမူနာကိုထုတ်ယူပြီးနောက် microdialysis လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲများကြောင့်ကြွက်နှစ်ကောင်သည် Basal output နှိုင်းယှဉ်မှုတွင်သာပါဝင်သည်။
ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့အေးစက်သောအရပ် preference ကို ((ဆိုလိုသည်မှာစမ်းသပ်မှုဒြပ်ပေါင်းများကိုဦးစားပေးအခန်းနှင့်အတူအနည်းဆုံးနှစ်သက်သောအခန်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူတွဲခဲ့ကြ) တဲ့ဘက်လိုက်ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု. Jerlhag ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည် et al. 2009) လေးလုံးတူညီ CPP ကသေတ္တာများ (Tse စနစ်များ, မကောင်းပါ Homburg, ဂျာမနီ), နှစ်ခုအခန်းပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦးချင်းစီ (45 × 22 × 40 စင်တီမီတာ) တစ်ဦး guillotine တံခါးကိုခြားပြီးနှင့်နံရံနဲ့ကြမ်းပြင်ပုံစံအဖြစ်ကြမ်းပြင် texture အားဖြင့်သိသာစွာကွဲပြားပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းများတွင်သုံးစွဲအချိန်ကိုအလိုအလျောက် 32 စင်တီမီတာအခန်းကြမ်းပြင် (ActiMot, Tse စနစ်များ) အထက်တွင်တည်ရှိသော2အနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။
;, အေးစက် (နေ့က 1-15;2မိနစ် / session တစ်ခု), နှင့် Post-အေးစက်စမ်းသပ်မှု (နေ့က 5; 60 မိနစ်) Pre-အေးစက် (6 မိနစ်နေ့က 15): အဆိုပါ CPP ကစမ်းသပ်မှုအဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်သည်။ ကနဦးအခြမ်း preference ကို (ထိုကြွက်အချိန်ထက်ပိုမို 50% သုံးစွဲဘယ်မှာဆိုလိုသည်မှာဘေးထွက်) pre-အေးစက်အဆင့်စဉ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါဘက်လိုက်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူလိုက်လျောရန်, နှစ်သက်သောဘက်မှာ 51 ထက်လျော့နည်းနှင့်၎င်းတို့၏အချိန်ထက်ပိုမို 75% ဖြုန်းကြွက်ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါအေးစက်အဆင့် (guillotine တံခါးကိုပိတ်လိုက်) စဉ်အတွင်းစီကြွက်တစ်နေ့လျှင်ဆိတ်ကွယ်ရာ6နာရီနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုဆေးထိုးလက်ခံရရှိပြီးကျပန်းမွန်းလွဲပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အတွက်စမ်းသပ်မှုနံနက်ယံ၌ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်မော်တော်ယာဉ်တစ်ခုခုနှင့်အတူအေးစက်တာဝန်ကျတယ်။ သုံးလေးမှအစည်းအဝေးများယေဘုယျအားဖြင့်ကြွက်များတွင်တ္ထုများဆုချီးမှကြံ့ခိုင် CPP ကရရှိရန်အသုံးပြုကြသည်အဖြစ်လေးအေးစက်အစည်းအဝေးများ Cunningham (ရှေးခယျြခဲ့သညျ et al. 2006; Tzschentke 2007) ။ ထိန်းချုပ်ရေးကြွက်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူတွဲခဲ့ကြသည်။ Post-အေးစက်စမ်းသပ်ကာလအတွင်းကြွက်များကိုထပ်နှစ်ဦးစလုံးအခန်းအခမဲ့ access ကိုပေးသည် ဖြစ်. , တစ်ဦးချင်းစီအခန်းများတွင်သုံးစွဲအချိန်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ CPP ကစကားရပ်ကို pre-အေးစက်နေစဉ်အတွင်းအတူတူအခန်းများတွင်သုံးစွဲအချိန်နှင့်အတူ, Post-အေးစက်နေစဉ်အတွင်းမူးယစ်ဆေး-တွဲအခန်းများတွင်သုံးစွဲအချိန်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ကြံ့ခိုင် CPP ကစကားရပ်အကြိမ်ကြိမ်မော်ဖင်းအကိုက်အေးစက် (Karami နှင့် Zarrindast အောက်ပါပြသထားသည် 2008); CPP ကသွေးဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CPP ကသေတ္တာထဲတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်များ၏စွမ်းရည်ထို့ကြောင့်မော်ဖင်းအကိုက် (10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, SC, အသုံးပြု. အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည် n = ၁၀) သို့မဟုတ်ဆား (n = 10) အေးစက်အဆင့်မိနစ် 30 ကြာမြင့်သောချွင်းချက်နှင့်အတူအစောပိုင်းကဖော်ပြထားသကဲ့သို့အေးစက်။
OSU6162 ၏ CPP ဖော်ပြမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုသည်အရက် - naïveကြွက်နှစ်မျိုးလုံးတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။n စမ်းသပ်ချက်မတိုင်မီ ၃ လခန့် IA20E ကိုပေးသောကြွက်များ (n = 20) ။ အေးစက်ချိန်အတွင်း OSU6162 (၃၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ sc) သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်ထိုးဆေးများကိုကြွက်များကိုအခန်းတစ်ခန်းနှင့်မချုပ်မီမိနစ် ၃၀ ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါအေးစက် session ရဲ့အရှည် (မိနစ် 30) နှင့် Pre- ကုသမှုအချိန် (မိနစ် 30) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည် NAc အတွက် dopamine output ကိုစနစ်တကျ OSU60 (30 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ဆေးထိုးပြီးနောက် 45 မိနစ်မှာအများဆုံးရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းပြသ ထို့နောက်မိနစ် ၆၀ ကျော်အရက်သောက်သည့်ကြွက်များ (Steensland) တွင်ထိန်းသိမ်းထားသည် et al. 2012).
အဆိုပါမဟုတ်သလိုအခန်းထဲကနှင့်တ္ထုအကြောင်းအသေးစိတ် SI တှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။ ပထမဦးဆုံးမဟုတ်သလို session တစ်ခုအတွင်းမှာတော့, တစ်ခုချင်းစီကြွက် 8 မိနစ် (လေ့ session တစ်ခု) ကာလအတွင်းပစ္စုပ္ပန်ဆိုတ္ထုမရှိဘဲအခန်းထဲသို့စူးစမ်းဖို့အခမဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ 12 မိနစ်ပြီးနောက်, ကြွက်ထပ်အခန်းနေရာချခြင်းနှင့်2မိနစ် (သင်တန်း) အတွက်အခနျး၏ဆန့်ကျင်ဘက်ရိုးကိုတွဲနှစ်ခုတူညီအရာဝတ္ထုစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ရခဲ့သည်။ အသီးသီး2သို့မဟုတ် 24 နာရီတစ်ခု intersession ကြားကာလ, ပြီးနောက်, ကြွက်ထပ်အခန်းနေရာချခြင်းနှင့်ငါးမိနစ် (စမ်းသပ် session တစ်ခု) စဉ်အတွင်းအတူတကွတဦးတည်းဝတ္ထုအရာဝတ္ထုနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေး session တစ်ခုထဲကနေတဦးတည်းအကျွမ်းတဝင်အရာဝတ္ထု၏တစ်ဦးမိတ္တူစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ရခဲ့သည်။ object ရာထူးနှင့်ပေါင်းစပ်တစ်ခုချင်းစီကြွက်အကြားတန်ပြန်မျှမျှတတရှိကြ၏။ နှစ်ဦးစလုံးသင်တန်းနှင့်စမ်းသပ်အစည်းအဝေးများဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ကြွက်တစ်ဦးချင်းစီအရာဝတ္ထုတစ်ခုမကျြစိကှသုတေသီ (XNote အချိန်မှတ်နာရီ) ကကိုယ်တိုင်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်ရှာဖွေစူးစမ်းသုံးစွဲအချိန်ကိုဖြစ်ကြသည်။ စမ်းသပ်မှု session တစ်ခုအတွင်းမှာတော့, (နှစ်ဦးစလုံးတ္ထုရှာဖွေစူးစမ်းစုစုပေါင်းအချိန်အားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲဝတ္ထုအရာဝတ္ထုရှာဖွေစူးစမ်းဆိုလိုသည်မှာစုစုပေါင်းအချိန်) ကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းအချိုးတွက်ချက်ခဲ့သည်ကြောင့်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုစူးစမ်းဖို့ကြွက်၏သဘာဝ preference ကို၏, ထိုဝတ္ထုအရာဝတ္ထုများ၏မြင်သာထင်သာတူးဖော်ရေးအောကျမေ့အဖြစ်မှတ်ခဲ့သည် အဆိုပါအကျွမ်းတဝင်အရာဝတ္ထု၏။ object တစ်ခု၏တူးဖော်ရေးအရာဝတ္ထု, sniffing ကိုက်သို့မဟုတ်ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုင်, တောင်တက်သို့မဟုတ်တက်ကြွတူးဖော်ရေးမဆိုနိမိတ်လက္ခဏာမရှိဘဲအရာဝတ္ထုအပေါ်မြှောင်တူးဖော်ရေးအဖြစ်သွင်းယူမခံခဲ့ရပါဘူး။
ပထမဦးစွာကျွန်တော်တစ်ဦး2နာရီကြားကာလ (ပြီးနောက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအချိုးနှိုင်းယှဉ်အသုံးပြုပုံစမ်းသပ်မှု session တစ်ခုအတွင်းမှာတစ်ဦး2နာရီ intersession ကြားကာလဟာကြွက်အဆိုပါသင်တန်းကာလအတွင်းမိတ်ဆက်သည့်အကျွမ်းတဝင်အရာဝတ္ထုမှတ်မိဖို့ခွင့်ပြုမယ်လို့အတည်ပြုပြောကြားn ၂၄ နာရီကြားကာလပြီးနောက် (= ၁၆)n = 16), သဘာဝကမေ့လျော့ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ (Nilsson နှင့် Carlsson 2013) ။ အဲဒီနောကျ, အ2နာရီ intersession ကြားကာလမှတ်ဉာဏ်ဝယ်ယူအပေါ် OSU6162 များ၏သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ OSU6162 (30 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, SC, n = 8) သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ် (n = 8) သင်တန်းမတိုင်မီမိနစ် 60 ပေးထား, နှင့်စမ်းသပ်မှု session တစ်ခုအတွင်းမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုအချိုးနှစ်ခုကုသမှုအုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ microdialysis စမ်းသပ်မှု, Basal dopamine ခုနှစ်, DOPAC နှင့် HVA ရလဒ် (fmol) (ရေရှည်သောက်သုံးတို့အကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်n = ၂၇) နှင့်အရက်သောက်ခြင်းn = 7) မန်း - Whitney သုံးပြီးကြွက် Uအဆိုပါအဘို့အ -test ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဆချက် t-test [တန်းတူစံသွေဖီမှု (SD)] တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမခံခဲ့ရပါ။
အရက်-သောက်သုံး (ထဲတွင် dopamine output ကိုအပေါ်တစ်ဦးစနစ်တကျအရက်စိန်ခေါ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်n = 7) အရက် - naïveကြွက်နှိုင်းယှဉ် (n အတွင်း - ဘာသာရပ်အချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်အဖြစ် = 5), အကြား - ဘာသာရပ်အချက်နှင့်အချိန်အဖြစ်အခြေအနေနှင့်အတူ Two- လမ်းထပ်ခါတလဲလဲ - တိုင်းတာ ANOVA ။ dopamine ထွက်ရှိမှု၏ပကတိတန်ဖိုး (fmol) ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်အသုံးပြုသည်။ အကြောင်းမှာအခြေအနေနှစ်မျိုး (အရက်သောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အရက်သောက်ခြင်းမရှိသော) တွင်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသော Basal dopamine အဆင့်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားသောအခြေအနေနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါက timepoint0(ΔAUC) ရှိတန်ဖိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကွေးကွေး (AUC) (timepoint ၀ မှ ၄၅ မိနစ်) အတွင်းရှိcalculatedရိယာကိုတွက်ချက်။ ဆန်းစစ်ခြင်းမပြုရသေးသောကျောင်းသား၏ သုံး၍ ဆန်းစစ်ခဲ့သည် tရေရှည်သောက်သုံးခြင်းနှင့်အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်အကြားအရက်သေစာ-သွေးဆောင်အထွတ်အထိပ်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ -test ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အဆိုပါ Basal DOPAC နှင့် HVA လက်ငင်းအခြေအနေလွတ်လပ်သောတို့သက်ဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးများရာခိုင်နှုန်း, အရှင်ပုံမှန်ခဲ့ကြသည် (မိနစ် -90 မှ -60 timepoints ၏ဆိုလို) နှင့်ထို့နောက် dopamine များအတွက်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ Two-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ အစောပိုင်းက။
မော်တော်ယာဉ်-မော်တော်ယာဉ်, OSU90-မော်တော်ယာဉ်, ယာဉ်: အအရက်သေစာ-သောက်သုံးကြွက်များမှာကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုအုပ်စုများအကြား Basal dopamine မရှိသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု, DOPAC နှင့် HVA (fmol) ရလဒ် (timepoints ၏ယုတ်မိနစ် -60 မှ -6162) ရှိကြ၏ -alcohol နှင့် OSU6162-အရက် (တလမ်း ANOVA; n = အုပ်စုတစ်စုနှုန်း = 6-8) ။ ထို့ကြောင့် dopamine နှင့် metabolites ထွက်ရှိမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအခြေခံ၏ရာခိုင်နှုန်းသို့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေပြီးကုသမှုအုပ်စုတစ်ခုစီအတွက် ANOVA ကိုအကြိမ်ကြိမ်တိုင်းတာ။ ANOVA ကိုအသုံးပြုပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ post ကို hoc အခြေခံဆီသို့သိသိသာသာအပြောင်းအလဲများကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့စမ်းသပ်။
အဆိုပါအရက်ဆေးထိုးရည်ညွှန်း (timepoint 6162 မိနစ်) အဖြစ်အရက်ဆေးထိုးမတိုင်မီချက်ချင်းနမူနာကို အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့သည်ပြီးနောက်အရက်-သွေးဆောင် dopamine output ကို, dopamine output ကိုအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲအပေါ်မော်တော်ယာဉ် pre-ကုသမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ် OSU0 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်ရန်။ ဒေတာအတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်အဖြစ်အကြား-ဘာသာရပ်အချက်နှင့်အချိန်အဖြစ်ကုသမှုနှင့်အတူအထပ်ထပ်-အစီအမံ Two-လမ်း ANOVA နှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအား CPP အချက်အလက်များအားတွဲဖက်သောကျောင်းသားများ အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည် t- ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်းကုသမှုအုပ်စုတစ်ခုစီအတွင်းစစ်ဆေးပါ။ NOR အချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမရှိသည့်ကျောင်းသား၏ သုံး၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည် tတစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခုအတွင်းမှာ -test ။
(ဆ / ကီလို 24 နာရီ) ပျမ်းမျှအရက်စားသုံးမှုပျမ်းမျှနှင့် interquartile အကွာအဝေး (IQR) အဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ အားလုံးသည်အခြားတန်ဖိုးများယုတ်နှင့်ယုတ်၏စံအမှား (SEM) အဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအရေးပါမှုအဆင့်မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် α = 0.05 ။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှုကိုဆော့ဖ်ဝဲ spss ဗားရှင်း ၂၂ (SPSS Inc. , Chicago, IL, USA) နှင့် GraphPad Prism version 22 (La Jolla, CA, USA) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သောက်ခြင်း၏ဆယ်ပါးလနျူကလိယ accumbens အတွက် hypo-dopaminergic ပြည်နယ်သွေးဆောင်
microdialysis, Basal နှင့်အရက်-သွေးဆောင်အသုံးပြုခြင်း (2.5 g / ကီလိုဂရမ်, ip) dopamine ၏ NAc လက်ငင်းနှင့်၎င်း၏ metabolites မိမိဆန္ဒအလျောက် 10 လလောက်အရက်မသောက်ခဲ့ကြွက်အကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် [4.2 (2.4-4.7) g / 24 နာရီနှုန်းကီလိုဂရမ်; သူတို့ရဲ့ဘဝအချိန်အရက်စားသုံးမှု] နှင့်အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်၏ပျမ်းမျှနှင့် IQR ။ အဆိုပါ Basal dopamine output ကို (fmol / မိနစ်များတွင်ပျမ်းမျှခြင်းနှင့် IQR အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆို) သိသိသာသာလျော့နည်းသွားခဲ့သည် (U = 41.5; P <0.05) ရေရှည်အရက်သောက် [1.8 (1.2-2.7) တွင်; n = 27] အရက် - naïveကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ [2.5 (2.3-3.3); n = 7] ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် Basal DOPAC တွင်အုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိပါ - အရက် - ၆၃၈ (၅၀၄-၇၃၄)၊ အရက် - naïve - ၆၉၁ (၅၈၂-၇၃၄)၊ U = 85.5; Non- သိသာထင်ရှားသော (NS)] သို့မဟုတ် HVA [အရက်: 243 (199-294), အရက် - naïve: 251 (192-263); U = 90.5; NS] output ။
တစ်ဦးစနစ်တကျအရက်စိန်ခေါ်မှု (ပုံကိုအောက်ပါ dopamine output ကိုလေ့လာခြင်း။ 1က) အချိန်တစ်ခုခြုံငုံအဓိကသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည် (F12, 120 = 51.1; P <0.001), အခြေအနေ [အရက်သောက် (n = 7) သို့မဟုတ်အရက် - naïveကြွက် (n = 5)] (F1, 10 = 7.3; P <0.05) နှင့်အချိန် * အခြေအနေအပြန်အလှန် (F12, 120 = 2.7; P <0.01). post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အရက်-သွေးဆောင် dopamine အထွတ်အထိပ် (ΔAUC, timepoint 0-45 မိနစ်) အရက်သေစာ-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအရက်-သောက်သုံးအတွက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ကြောင်းပြသ (သဖန်းသီး။ 1b, t10 = 2.8; P <0.05) ။ အရက်စိန်ခေါ်မှုအပြီး DOPAC နှင့် HVA ရလဒ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအရက်နှင့်အရက်သောက်ခြင်းမရှိသောကြွက်များအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် (အထောက်အကူပြုသတင်းအချက်အလက်ပုံ ၁၊ SI တွင်စာရင်းအင်းအသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါ) ။
ပုံ 1။ နျူကလိယအတွင်းရှိ dopamine ထွက်ရှိမှုသည်စနစ်တကျအရက်အခက်အခဲကြောင့်ရေရှည်သောက်သုံးသည့်ကြွက်များတွင်ပြတ်တောက်သွားခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဆန္ဒအလျောက်အရက်သောက်သုံးခြင်းအပြီးနျူကလိယရှိ dopamine ထွက်ရှိမှုအပေါ်စူးရှသောအရက်စိန်ခေါ်မှု (၂.၅ ဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ ip) ၏ဆိုးကျိုးများကိုအကဲဖြတ်ရန် microdialysis ကို ၁၀ လကြာ 2.5% အီသနောကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသွားပြီးနောက် နှစ်ပုလင်း - ရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်း (= = 10) နှင့်အသက်အရွယ် - လိုက်ဖက်အရက် - naïveကြွက် (= = 20) ၌တည်၏။ (က) သိသိသာသာခြုံငုံသောအခြေအနေနှင့်အခြေအနေ * အချိန်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (နှစ်လမ်းသွားအကြိမ်ရေ - ပြသမှု) အရအရက်သောက်ခြင်းနှင့်ရေရှည်သောက်သုံးခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်းမရှိသောကြွက်များတွင် dopamine output ကို (mean ± SEM, fmol / min) ကွဲပြားစွာထိခိုက်ခဲ့သည်။ အတွင်း - ဘာသာရပ်အချက်အဖြစ်အကြား - ဘာသာရပ်အချက်နှင့်အချိန်အဖြစ်အခွအေနေနှင့်အတူ ANOVA) ။ (ခ) အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီရှိ timepoint7နှင့်သက်ဆိုင်သော timepoints ၀ မှ ၄၅ မိနစ်အကြား curve (UCAUC) ရှိareaရိယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းအရက် - သွေးဆောင် dopamine အထွတ်အထိပ်သည်အရက်သောက်ခြင်းတွင်သိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည် (ကျောင်းသား၏ t-test, * P <5 အရက်နုံကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက)
(-) - OSU6162 သည့်နျူကလိယထဲတွင် hypo-dopaminergic ပြည်နယ် counteracted ရေရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သောက်သုံးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် accumbens
မော်တော်ယာဉ်-မော်တော်ယာဉ် (: (အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှော့ Basal dopamine output ကိုအတူအစောပိုင်းရလဒ်တွေကိုကြည့်ပါ) ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်များ၏အုပ်စုလေးခုကုသမှုအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့သည်n = 6), မော်တော်ယာဉ် - အရက် (n = 7), OSU6162- မော်တော်ယာဉ် (n = 8) နှင့် OSU6162 - အရက် (n (၇) OSU7 ၏သက်ရောက်မှုများကို NAc ရှိ dopamine, DOPAC နှင့် HVA ရလဒ်များအပေါ်တစ် ဦး တည်းသော်လည်းကောင်း၊ အရက်နှင့်ပေါင်းစပ်။ သော်လည်းကောင်းအကဲဖြတ်ရန်။ Basal dopamine ရှိကုသမှုအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိပါ (6162 ± 1.97 fmol / min; F3, 23 = 0.2), DOPAC (649 ± 46 fmol / min; F3, 23 = 0.3) သို့မဟုတ် HVA (242 ± 22 fmol / min; F3, 23 = 1.2) output ကို။ ထို့ကြောင့်ဒေတာများကိုပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတစ် ဦး ချင်းစီ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တင်ပြခဲ့သည်။ မော်တော်ယာဉ် - မော်တော်ယာဉ်အုပ်စု (ပုံ။ S2) တွင်, dopamine အပေါ်အလုံးစုံအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိ (F16, 80 = 0.9; NS သို့မဟုတ် HVA (F16, 80 = 1.1; NS) လက်ငင်းရလဒ်များ။ သို့သော် DOPAC ၏ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။F16, 80 = 3.2; P <0.001) နှင့် post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ timepoints 150 နှင့် 180 မိနစ်မှာအခြေခံဆီသို့သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။
အဆိုပါအရက်-မော်တော်ယာဉ်အုပ်စုတစု (ပုံပါ။ 2တစ်ဦး), dopamine အပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့F16, 96 = 18.0; P <0.001), DOPAC (F16, 96 = 8.6; P <0.001) နှင့် HVA (F16, 96 = 9.3; P <0.001) ရလဒ်များ။ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကသိသိသာသာ 15- ထံမှ 30 မိနစ် timepoints မှအခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါယုတ်လျော့ခဲ့သည်သော်လည်းအဆိုပါ dopamine output ကိုသိသိသာသာ, အခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု 90- နှင့် 165 မိနစ် timepoints မှာတိုးပွားလာခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ။ HVA output ကိုသိသိသာသာအခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 30 မိနစ် timepoints ဖို့ 30- ထံမှခြီးမွှောကျခံခဲ့ရသော်လည်းထို့အပြင် DOPAC output ကိုသိသိသာသာသည် 135 မိနစ် timepoint မှာအခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ပုံ 2။ (-) - OSU6162 (OSU6162) ရေရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သောက်သုံးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် hypo-dopaminergic ပြည်နယ် counteracts ။ Microdialysis နျူကလိယ dopamine ၏ accumbens output ကိုနှင့် dopamine metabolites တိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည် မော်တော်ယာဉ်-အရက် (3,4 g / ကီလိုဂရမ်, ip) နဲ့ကုသမှုအောက်ပါ 2.5-dihydroxyphenylacetic အက်ဆစ် (DOPAC) နှင့် homovanillic အက်ဆစ် (HVA) (က), OSU6162 (30 SC / ကီလိုဂရမ် mg) -vehicle (ခ) နှင့် OSU6162-အရက် ( ကုသမှုနှုန်းက c) (ဎ = 7-8) အရက်ထက် 10 နာရီဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း 20% အီသနော Two-ပုလင်း-ရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်း () ရန်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်းအတွက်သောက်သုံးရေ၏ 24 လအကြာအောက်ပိုင်း Basal dopamine output ကိုခဲ့သောနိုး Wistar ကြွက်အတွက် -naïveအသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှု။ (က) T-သူကသိသိသာသာတိုးမြှင့်အရက်စိန်ခေါ်မှု acute နှင့်အသီးသီးဆေးထိုးပြီးနောက် 15 နှင့် 30 မိနစ်အကြားနှင့် 90 နှင့် 165 မိနစ်အကြားအခြေခံနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် dopamine output ကိုလျော့နည်းသွားသည်။ အရက်စိန်ခေါ်မှုအပြီးမိနစ် ၃၀ နှင့် ၃၀-၁၃၅ မိနစ်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက DOPAC နှင့် HVA ရလဒ်များသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ (ခ) OSU30 အုပ်ချုပ်မှုသိသိသာသာတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားသည် (timepoint -30 မိနစ်မှ)၊ (DPAC နှင့် HVA (timepoint -135 မိနစ်) မှ) dopamine သည်စမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးအခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်တက်သည် (ဆိုလိုသည်မှာ OSU6162 ဆေးထိုးပြီးနောက်အနည်းဆုံး ၄ နာရီ) ။ (ဂ) OSU45 ကိုအရက်စိန်ခေါ်မှုမတိုင်မီမိနစ် (၆၀) အကြာတွင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သောအခါ၊ dopamine သည် (၄၅) မှမိနစ် (၆၀) မှမိနစ် (၆၀) အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး DOPAC နှင့် HVA ရလဒ်များသည်တိုင်းတာထားသောအချိန်ကာလများအားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတိုးပွားလာခဲ့သည်။ အခြေခံတန်ဖိုးများ (fmol / min) သည်ကုသမှုအုပ်စုများ (one-way ANOVA) အကြားကွာခြားမှုမရှိသောကြောင့်တန်ဖိုးများကိုသက်ဆိုင်ရာတစ် ဦး ချင်းစီ၏ရာခိုင်နှုန်း (mean ± SEM) ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တင်ပြသည်။ အချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုတစ်ခုစီတိုင်းတွင်ထပ်တလဲလဲ - ANOVA ကို အသုံးပြု၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခဲ့သည်။ အတွင်း - ဘာသာရပ်အချက်အဖြစ် Fisher သည်အနည်းဆုံးထူးခြားသည့် post-hoc test ဖြင့်နောက်မှလိုက်သည်။ မြှားများသည်ဆေးထိုးချိန်ကိုညွှန်ပြသည်။ dopamine output ကိုအခြေခံ (* P <30, ** P <4, *** P <6162) နှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောအခါ Asterisks timepoints ဖော်ပြသည်။ စုပြုံပြွတ်သိပ်မှုကိုရှောင်ရှားရန် DOPAC နှင့် HVA တို့တွင်ကြယ်ပွင့်များကိုချန်လှပ်ထားသည်။ OSU, OSU6162; အယ်လ်၊ အရက်၊ ယာဉ်၊
OSU6162 မော်တော်ယာဉ်အုပ်စု (ပုံ - ၂ ခ) တွင် dopamine အပေါ်သိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည် (F16, 112 = 4.0; P <0.001), DOPAC (F16, 112 = 19.6; P <0.001) နှင့် HVA (F16, 112 = 53.6; P <0.001) ရလဒ်များ။ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထင်ရှား dopamine output ကိုသိသိသာသာချက်ချင်းဆေးထိုး (timepoint -45 မိနစ်) အပြီးတွင်အခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြီးမွှောကျခဲ့ကွောငျး, (timepoint 75 မိနစ်) ဆေးထိုးပြီးနောက်ဦးရေအများဆုံး 15 မိနစ်ရောက်ရှိနှင့်သိသိသာသာ Dialysis session တစ်ခု (timepoint 180 မိနစ်) တလျှောက်လုံးသို့ခြီးမွှောကျခံနေရပါသည်။ DOPAC နှင့် HVA သိသိသာသာ 30 မိနစ် timepoints ဖို့ -180- ထံမှအခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ OSU6162-အရက်အုပ်စုသည် (ပုံပါ။ 2က c), အ dopamine တခုတခုအပေါ်မှာခြုံငုံအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့F16, 96 = 7.3; P <0.001), DOPAC (F16, 96 = 17.5; P <0.001) နှင့် HVA (F16, 96 = 29.9; P <0.001) ရလဒ်များ။ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ dopamine output ကိုသိသိသာသာ -30- ထံမှ 60 မိနစ် timepoints မှအခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြီးမွှောကျခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ။ DOPAC နှင့် HVA ၏အကျိုးရလဒ်များသိသိသာသာ OSU6162 ဆေးထိုးပြီးနောက်အားလုံး timepoints မှာအခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။
နောက်ထပ်အရက်ဆေးထိုး (timepoint 6162 မိနစ်) ယာဉ်-အရက်နှင့် OSU0-အရက်ကုသမှုအုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်ချက်ချင်းမှီ, NAc အတွက် timepoint ထံမှ dopamine output ကိုအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကွာခြားချက်အရက်-သွေးဆောင် dopamine output ကိုအပေါ် OSU6162 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ရန်။ အချိန်သိသိသာသာခြုံငုံအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်F3.1, 36.7 = 20.1; P <0.001), ဒါပေမယ့်ကုသမှု၏ (မF1, 12 = 0.46; ns), နှင့်အချိန်မ * ကုသမှုအပြန်အလှန် (F3.1, 36.7 = 2.6; P = 0.067) အရက် - သွေးဆောင် dopamine output ကို (ပုံ။ ) ရက်နေ့တွင် 3) ။ ထို့ကြောင့်အဘယ်သူမျှမ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကောက်ယူခဲ့သည်။
ပုံ 3။ (-) - နှင့်အတူ pre-ကုသမှု OSU6162 (OSU6162) ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်အရက်-သွေးဆောင် dopamine output ကိုမသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ (ကြိုတင်အရက်ဆေးထိုးဖို့ချက်ချင်း, ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်များအတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက်အထူးအရက်-သွေးဆောင် dopamine output ကိုအပေါ် timepoint 6162 မိနစ် timepoint မှာ output ကိုမှစပ်လျဉ်း dopamine output ကိုအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲ OSU0 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်မှ ) ယာဉ်-အရက်နဲ့ကုသကြွက် (2.5 g / ကီလိုဂရမ်, ip) သို့မဟုတ် OSU6162 အကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပါသည် (30 / ကီလိုဂရမ်, SC) -alcohol mG ။ အဆိုပါ OSU6162-pretreated (ထိုအတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်အဖြစ်အကြား-ဘာသာရပ်အချက်နှင့်အချိန်အဖြစ်ကုသမှုနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ Two-လမ်း ANOVA) မော်တော်ယာဉ်-pretreated အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မသိသိသာသာခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်။ ± SEM (ဎ = ကုသမှုနှုန်း 7) ကိုဆိုလိုတာအဖြစ်တန်ဖိုးများကိုတင်ပြကြသည်
(-) - OSU6162 ရေရှည်သောက်သုံးသို့မဟုတ်အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်အခြေအနေများအရပျကို preference ကိုသွေးဆောင်ဘူး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CPP ကသေတ္တာထဲမှာ CPP ကလွယ်ကူချောမွေ့ရန်စွမ်းရည် (ထိုမော်ဖင်းအကိုက်-အေးစက်ကြွက်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်n = 8) Pre- အေးစက်ကာလအတွင်းတူညီသောအခြမ်းနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်, အေးစက် Post- စဉ်အတွင်း morphine- တွဲဖက်ဘက်မှာသိသိသာသာပိုပြီးအချိန်နေခဲ့ရသည် (ပုံ။ 4တစ်ဦးညာဘက် panel က), အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်ယာဉ်-အေးစက်ကြွက် (တှငျတှေ့မွငျခဲ့သညျသော်လည်းn = 9; သဖန်းသီး။ 4တစ်) panel ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။
ပုံ 4။ (-) - OSU6162 (OSU6162) သည်ရေရှည်အရက်သောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အရက်သောက်ခြင်းမရှိသောကြွက်များတွင်အေးစက်စက်သောနေရာကို ဦး စားပေး (CPP) သွေးဆောင်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ OSU6162 ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်၊ စမ်းသပ်မှုမတိုင်မှီ ၃ လကြာအရက် (၂၀% အီသနောကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြင့်ဝင်ရောက်ခြင်း) သောက်သုံးခဲ့ကြသည့်အရက် - na rve ကြွက်များနှင့်ကြွက်များသည် CPP ပါရာဒိုင်းကိုလက်အောက်ခံခဲ့သည်။ (က) ပထမအချက်အနေဖြင့် CPP သေတ္တာများသည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းမတိုင်မီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မော်ဖင်းအကိုက်တွဲဖက်မှုတွင်သုံးစွဲသောသိသိသာသာတိုးလာသည့်အချိန်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းမော်ဖင်းအအေးခံခြင်း (၁၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ sc) အား CPP ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အတည်ပြုခြင်းခံရသည် ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ကားဖြင့်ကုသသည့်ကြွက်များတွင် CPP ၏ဖော်ပြချက်မရှိပါ။ OSU20 (၃၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ sc) နှင့်မော်တော်ယာဉ်ကုသမှုသည် (ခ) အရက် - နုံအုံသို့မဟုတ် (ဂ) အရက်သောက်သုံးသည့်ကြွက်များတွင် CPP ကိုသွေးဆောင်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ အားလုံးတန်ဖိုးများကိုယုတ်± SEM (ကုသမှုနှုန်း n- 3-10) အဖြစ်တင်ပြနေကြသည်။ ကုသမှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီတွင်ကျောင်းသား၏ t-test ကို သုံး၍ အချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည် (ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားစဉ်ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးတွဲဖက်ထားသည့်အချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက) *** P <6162 သက်ဆိုင်ရာကြိုတင်အေးစက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
OSU6162 ၏ဖြစ်နိုင်သောအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုအကဲဖြတ်ရန် CPP စမ်းသပ်မှုကိုအရက်သောက်သောကြွက်များတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် [IA20E; ၂.၆ (၂.၁–၃.၂) g / kg / day] ၃ လအတွက်သာမကအရက်မပါသောကြွက်များတွင်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်များအရအရက်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်သောက်ကြွက်များ (ပုံ - ၄ ခနှင့်ဂ) သည် OSU2.6 (သို့) မော်တော်ယာဉ်နှင့်ဖြစ်စေအေးစက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။n = ကုသမှုအုပ်စုတစ်စုလျှင် 8-9), Pre- အေးစက်စဉ်အတွင်းတူညီသောခြမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Post- အေးစက်နေစဉ်အတွင်းအသီးသီး OSU6162- တွဲသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ် - တွဲဘက်မှာသုံးစွဲအချိန်ပမာဏသိသိသာသာခြားနားချက်ပြသခဲ့သည်။
(-) - OSU6162 ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုစမ်းသပ်မှုအတွက်မှတ်ဉာဏ်ဝယ်ယူမထိခိုက်ခဲ့ပါ
အဆိုပါမဟုတ်သလိုစမ်းသပ်မှုများတွင်ကြွက်တစ်ဦး2နာရီ intersession ကြားကာလ (ပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦး 24 နာရီ intersession ကြားကာလအောက်ပါတစ်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအချိုးအစားရှိခဲ့ပါတယ်။ 5က), စမ်းသပ်မှု session တစ်ခုအတွင်းမှာကြွက်,2နာရီအစောပိုင်းကကျင်းပလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကာလအတွင်းမိတ်ဆက်အရာဝတ္ထုကိုအောကျမေ့ကြောင်းအတည်ပြု။ ထို့ကြောင့် OSU2 ၏ရေရှည်သောက်သုံးသည့်ကြွက်များတွင်မှတ်ဥာဏ်ရရှိမှုစွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ရန် ၂ နာရီကြာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် OSU6162 - ကုသထားသောသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်ကုသသောကြွက်များအကြားလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်နေစဉ်အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုစူးစမ်းလေ့လာသည့်စုစုပေါင်းအချိန်နှင့်သိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ 5ခ) ။ သင်္ဘောသဖန်း; နှစ်ဦးစလုံး OSU6162-ကုသနှင့်မော်တော်ယာဉ်-ကုသကြွက်အဆိုပါကုသမှုအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အတူစမ်းသပ် session တစ်ခု (စဉ်အတွင်း 0.5 အထက်တစ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအချိုးအစားရှိခဲ့ပါတယ်။ 5ဂ) တစ်ဦးအလုပ်လုပ်တဲ့မှတ်ဥာဏ်ဝယ်ယူညွှန်ပြ။
ပုံ 5။ (-) - OSU6162 (OSU6162)2နာရီအရာဝတ္ထုတင်ဆက်ပြီးနောက်အရာဝတ္ထုမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခဲ့ပါဘူး။ လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းကြွက်များအားတူညီသောအရာဝတ္ထုနှစ်ခုကို ၂ မိနစ်အတွင်းစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၂- ၂၄ နာရီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကာလအပြီးတွင်ကြွက်များအားလေ့ကျင့်ခန်းမှအကျွမ်းတ ၀ င်အရာဝတ္ထုတစ်ခုနှင့်အသစ်သောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ၅ မိနစ်စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ။ စမ်းသပ်ကာလအတွင်း ၀.၅၀ အထက်တွင်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းအချိုး (ဆိုလိုသည်± SEM၊ ၀ တ္ထုနှစ်ခုလုံးကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်ခွဲထားသောဝတ္ထုတူးဖော်ခြင်းကိုလေ့လာခြင်း) သည်အကျွမ်းတဝင်အရာဝတ္ထုကိုအမှတ်ရခြင်းကိုညွှန်ပြသည်။ (က) ကြွက်များသည် ၂ နာရီကြာပြီးနောက်အကျွမ်းတဝင်အရာဝတ္ထုကို ၂၄ နာရီ၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအကြိမ်အပြီးတွင်မှတ်မိကြသည် (အခြေအနေတစ်ခုအတွက် n = ၁၆) ။ (ခ) လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကာလအတွင်းအရာဝတ္ထုနှစ်ခုလုံးကိုလေ့လာရန်သုံးစွဲသောစုစုပေါင်းအချိန်သည် OSU2 - ကုသသောကြွက်များနှင့် (၃၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ SC; n = 2, S24 မတိုင်မီမိနစ် ၆၀) နှင့်မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်ကုသသောကြွက်များနှင့်ခြားနားသည်မဟုတ်။ (ဂ) ၂ နာရီကြာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကာလကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်စမ်းသပ်ကာလအတွင်း OSU5 ကုသမှုနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်ကုသသောကြွက်များအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုအချိုးအစားသိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိပါ။ တန်ဖိုးအားလုံးကို SEM ± mean ဟုဖော်ပြသည်။ အချက်အလက်များကိုလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုစီတိုင်း၌မသန်စွမ်းကျောင်းသား၏ t-test ကို အသုံးပြု၍ ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ *** P <0.50 ၂၄ နာရီ ၂၂ နာရီကြားကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၌, ကျနော်တို့က monoamine stabilizer OSU6162 ရေရှည်သောက်သုံး Wistar ကြွက်များတွင်ငွေထုတ်စဉ်အတွင်း NAc အတွက် dopamine လိုငွေပြမှု counteracts သောပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသသည်။ ထို့အပွငျကျနော်တို့ CPP ကဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် OSU6162 ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဆုချီးမခံခဲ့ရကြောင်းပြပြီး, ထို့ကြောင့်အများဆုံးဖွယ်ရှိဆိုအလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ယူမှုကိုအပိုင်မပေးပါဘူး။ စုပေါင်းဤတွေ့ရှိချက် OSU6162 (ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာအကဲဖြတ်ကဲ့သို့တူညီသောထိုးမှာ) ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်များတွင်အများအပြားအရက်-mediated အပြုအမူတွေ attenuates ကြောင့်ထူထောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုကိုထောကျပံ့ (Steensland et al. 2012) နှင့်အရှင်တစ်ဝတ္ထု AUD ဆေးဝါးအဖြစ်အလားအလာရှိပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှု (IA10E) ၏ 20 လအတွင်းအသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု NAc အတွက် hypo-dopaminergic ပြည်နယ် induces ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ပထမဦးစွာ Basal dopamine output ကို (fmol တန်ဖိုးများ) သိသိသာသာအခြား microdialysis လေ့လာမှု supporting, ဆုတ်ခွာ၏ 24 နာရီအကြာတွင်လျော့နည်းသွားခဲ့သည် IA7E (ဗာရက်၏ 20 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင် Wistar ကြွက်များတွင်အလားတူရလဒ်တွေကိုဖေါ်ပြခြင်း et al. 2011) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်နောက်ထပ် (Jonsson သောက်သုံးအရက်၏,4လအတွင်း 10 လအတွင်းအပြီးလျော့နည်းသွား dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်ဖြင့်ယခင်လေ့လာမှုမတူဘဲ၌, ထို dopamine system ပေါ်တွင်အရက်သောက်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများကြာရှည်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြပေမယ့်မရ et al. 2014) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲအနိမ့်အရက်စားသုံးမှုနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်-access ကိုအချိန်ဇယားကိုအဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုမှာစဉ်ဆက်မပြတ်ကြာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏မရှိခြင်းများအတွက်အကောင့်အံ့သောငှါသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာအရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရေရှည်သောက်သုံးအတွက်စနစ်တကျအရက်စိန်ခေါ်မှုအောက်ပါတုံး dopamine တုံ့ပြန်မှု detoxified အရက်-မှီခိုလူနာလျှော့ချအလယ်ပိုင်းလှုံ့ဆော်-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖေါ်ပြခြင်းကဦးနှောက်-ပုံရိပ်လေ့လာမှုများထောက်ပံ့ရှိ၏ (Martinez et al. 2005; Volkow et al. 2007). နောက်ဆုံးအနေနဲ့ dopamine output ကိုအဆိုပါအရက်-သွေးဆောင် dopamine အထွတ်အထိပ်၏ချုပ်ရာကိုအောက်ပါအခြေခံတန်ဖိုးများကိုအောက်တွင်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ စုပေါင်း, အရက်၏မြင့်မားသောပမာဏ၏ဆန္ဒအလျောက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစားသုံးမှု၏ 10 လအတွင်းအောက်ပါတစ် hypo-functioning dopamine system ကိုဖေါ်ပြခြင်းပစ္စုပ္ပန် microdialysis ရလဒ်များကို, နာတာရှည်အရက်သောက်အရက်-မှီခိုလူနာတစ်ပြည်နယ်အတွက် downregulated dopamine စနစ်အထောက်အကူပြုသောအယူအဆများအတွက်ထောက်ခံမှုပေး ကြောင်းအလှည့်အတွက် AUD လူနာပြန်သွားကြသည်မှဦးဆောင်အရက်တဏှာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအရာ, dysphoria နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့အကြံပြုထားသည် (Weiss et al. 1996; ကြေးဇူး 2000; ဒိုင်ယာနာ 2011; Becker ကနှင့် Mulholland 2014).
ကျနော်တို့ယခင်ကအရက်ရှာ reinstatement နှင့်ဆုတ်ခွာကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာ (ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်များတွင် cue / priming-သွေးဆောင်သည်, monoamine stabilizer OSU6162 မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သောက်သုံး attenuates ကြောင်း Steensland ထူထောင်ခဲ့ကြ et al. 2012) ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်လေ့လာမှု OSU6162 အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်များ၏ NAc (Steensland အတွက်အရက်-သွေးဆောင် dopamine အထွတ်အထိပ်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေကြောင်းပြသ et al. 2012) ။ သို့သော်ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်များတွင်ကောက်ယူပစ္စုပ္ပန် microdialysis လေ့လာမှု OSU6162, ယာဉ် pre-ကုသမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, အရက်-သွေးဆောင် dopamine အထွတ်အထိပ်မသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ခြားနားသော microdialysis ရလဒ်များသည်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်းမရှိသောကြွက်များနှင့် OSU6162 သည်အရက်သောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအားဖြည့်ခြင်းဖြင့်အရက်သောက်ခြင်းဖြင့်ပြုမူသောအပြုအမူများကိုလျော့ချပေးသည်ဟူသောအယူအဆကိုကျွန်ုပ်တို့အားငြင်းဆန်စေခဲ့သည်။ (Steensland et al. 2012) ။ ငါnstead, ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကို OSU6162 ရေရှည်သောက်သုံးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ hypo-dopaminergic ပြည်နယ်တန်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါဟာအယူအဆ OSU6162 တစ်ဦးတည်း NAc dopamine output ကိုနှင့် OSU6162 Pre-ကုသမှုရှည်အတွက်အရက်-သွေးဆောင် NAc dopamine အထွတ်အထိပ်၏ချုပ်ရာကိုအောက်ပါအခြေခံတန်ဖိုးများကိုအောက်တွင်ကျဆင်းနေထံမှ dopamine output ကိုတားဆီးတဲ့ကြာရှည်ခံတိုးသွေးဆောင်သောပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်ကထောက်ခံနေသည် -term အရက်သောက်ကြွက်များ။ ဤကဲ့သို့သောအကြံပြုချက်မျိုးကိုထပ်မံဖွင့်အလုံအလောက်အရက်အရက်ဆုတ်ခွာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလျှက်ကြွက်ကျောအခြေခံမှ dopamine output ကိုပြန်လာမှဖေါ်ပြခြင်းယခင်လေ့လာမှု (Weiss ကထောက်ခံနေသည် et al. 1996) နှင့် AUD စဉ်အတွင်းတစ် hypo-dopaminergic ပြည်နယ်အရက်တဏှာမောင်းကြောင်းအယူအဆ, compulsive သောက်သုံးရေနှင့် relapse ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေ (ဒိုင်ယာနာ 2011). ထို့ကွောငျ့ OSU6162 တစ်ဦးအရက်-သွေးဆောင် hypo-dopaminergic ပြည်နယ်တန်ပြန်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်မှတဆင့်, အရက်မသောက်ရရန်တိုက်တွန်းလျော့ကျလာခြင်းဖြင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်-mediated အပြုအမူတွေ attenuates တာဖြစ်နိုင်တယ်။
OSU6162 ၏ရေရှည်သောက်သုံးသည့်ကြွက်များတွင် NAc hypo-dopaminergic state ကိုတန်ပြန်ရန်စွမ်းရည်၏နောက်ကွယ်ရှိစက်ယန္တရားအတိအကျကိုမူမသိရသေးပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ OSU6162 အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် dopamine လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်အကြံပြုထားသည်: (1) ဖြင့် dopamine လွှတ်ရာအပျက်သဘောတုံ့ပြန်ချက် disinhibiting D2 autoreceptors မှာရန်, (Carlsson et al. 2004), သို့မဟုတ်ဖြင့် dopamine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်သည့် postsynaptic D2 receptors မှာ (2) တစ်ခု allosteric modulator တွေကို, (Kara- et al. 2010) ။ microdialysis ကမှတ်တမ်းတင်အဖြစ် dopamine အဆင့်ဆင့်အတွက်တစ်ဦးကမြင့်တက်, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ OSU6162 ကုသမှုအောက်ပါတစ်ခုတိုးလာ dopamine လွှတ်ပေးရန်သို့မဟုတ် dopamine တစ်လျော့နည်းသွား reuptake ဖြစ်စေဖော်ပြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကို OSU6162 တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားအလားတူအတိုင်းအတာ (အစားလျော့နည်းသွား dopamine reuptake ၏ dopamine လွှတ်ပေးရေးတစ်ခုတိုးတစ်ခုအရိပ်အယောင်) ကိုအခြေခံအထက်တွင်ခြီးမွှောကျသည့် dopamine နဲ့ DOPAC output ကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အရှင် presynaptic autoreceptor မှာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကြောင်းညွှန်ပြကြောင်းပြသ အများဆုံးဖွယ်ရှိယန္တရား။ ထို့အပြင် OSU6162-သွေးဆောင် dopamine မြင့်အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်များတွင်ယခင်ကမြင်ကြကြောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်အရက်-သောက်သုံးကြွက်များပိုမိုကြာရှည်ခံခဲ့သည် (Steensland et al. 2012), possibly ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျောက်တွေကိုယခင်ကပြသခဲ့ပြီးသည့်တိုးလာ D2 autoreceptor sensitivity ကို၏ဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှု 18 လအတွင်းအောက်ပါ (Budygin et al. 2003) နှင့်နာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအီသနောငွေ့ထိတွေ့ပါရာဒိုင်း (Karkhanis သုံးပြီးကြွက်တွေမှာ et al. 2015) ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှု (Steensland အတွက်အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်ကြောင်း, သို့သော်သတိပြုသင့်ပါတယ် et al. 2012) ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်များထက်လအနည်းငယ်အငယ်ရှိကြ၏။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေအရက်-သောက်သုံးကြွက်သာရှိပြီးပြည်ပမှအရက်-ရင်တော့မှားမယ်အတွက် OSU6162 များ၏လေ့လာ differential ကိုသက်ရောက်မှုများ dopamine စနစ်အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုကနေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါတည်ရှိ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ optogenetics သုံးပြီးမကြာသေးခင်လေ့လာမှုလုပ်သူများ (အနိမ့်, ဒါပေမယ့်ကြာရှည်) ထိုပြသော်လည်းမ phasic (ကြီးမားသော, ဒါပေမယ့်ခဏတာ), အ NAc အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန် 20 များအတွက် IA7E လုပ်ထုံးလုပ်နည်းခံဖူးကြောင်းကြွက်များတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှုလျှော့ချ ရက်သတ္တပတ် (ဘေ့စ et al. 2013). ဤရလဒ်သည်ကြွက်များတွင်အရက်သောက်ခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူပြုနိုင်သောအပြုအမူများကိုစုပ်ယူနိုင်သည့်ဒြပ်ပေါင်း၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွင်တည်ငြိမ်ပြီးမြင့်မားသော dopamine အဆင့်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် OSU6162 စွမ်းရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခြုံငုံနားလည်မှုကိုထောက်ခံသည်။
ASU နှင့်အတူလူနာလူ ဦး ရေအတွက် OSU6162 ၏ကုထုံးဆိုင်ရာအသုံးချနိုင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ OSU6162 သည်ရေရှည်သောက်သုံးခြင်းတွင် NAc dopamine ထွက်ရှိမှုနှင့်အရက်သေစာမပါသောကြွက်များကိုတိုးပွားစေကြောင်းပြသထားသည့်လက်ရှိနှင့်ယခင်တွေ့ရှိချက်များကအလွဲသုံးစားမှုကိုညွှန်ပြနိုင်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ တာဝန်ယူမှု။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်အရက်နှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောလျင်မြန်သည့်အထွတ်အထိပ်နှင့်မတူဘဲ (Di Chiara နှင့် Imperato) 1988; Volkow နှင့် Swanson 2003), အ OSU6162-သွေးဆောင် dopamine မြင့်တက်အရက်-အရက်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, OSU6162 ရေရှည်သောက်သုံးသို့မဟုတ်အရက်-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်ဖြစ်စေတစ်ဦး CPP ကသွေးဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ အလားအလာအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့နှင့်တွဲအခန်းထဲကသင်ယူဖို့တခုချို့ယွင်းစွမ်းရည်တစ်ခု OSU6162-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏မရှိခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဝတ္ထုနှင့်အကျွမ်းတဝင်အရာဝတ္ထုအကြား OSU6162-ကုသကြွက်များအလွယ်တကူလူမျိုးအတန်းအစားခွဲခြားမှုသောတွေ့ရှိချက်များကထွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်ခဲ့ဖြစ်နိုင်ချေ ယင်းအတွက်မဟုတ်သလိုပါရာဒိုင်း။ ထို့အပြင်မကြာသေးမီကလေ့လာမှု (Spatial တွေကိုမှအသင်းအဖွဲ့ပတျသကျ) အရာဝတ္ထုတည်နေရာမှတ်ဉာဏ် (Nilsson နှင့် Carlsson တကယ်တော့ OSU6162-ကုသမှုတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသ 2013), OSU6162 ကုသမှုသဘာဝမေ့ပါရာဒိုင်းအတွက်သိမြင်မှုဂုဏ်သတ္တိများပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ စုပေါင်းဤတွေ့ရှိချက် OSU6162 အများဆုံးဖွယ်ရှိ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်မည်သည့်အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများအပိုင်နှင့်တစ်ဦးအလားအလာအလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ယူမှုကိုဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်ပါဘူးဖော်ပြသည်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ရေရှည်သောက်သုံး Wistar ကြွက်များ၏ NAc အတွက်လျော့နည်းသွား Basal dopamine output ကိုဖေါ်ပြခြင်းပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုနာတာရှည်အရက်သောက် AUD လူနာတစ်ဦး hypo-dopaminergic ပြည်နယ် induces သောအယူအဆခိုင်မာစေ။ ထို့အပွငျကြှနျုပျတို့အ monoamine stabilizer OSU6162 ရေရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သုံးစွဲမှုနှင့် abstinence ၏ကာလသံသရာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်သည့် mesolimbic dopamine သည့်စနစ်အတွင်းကဤ allostatic အပြောင်းအလဲများကိုတန်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကို OSU6162 မျှအလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ယူမှုရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ T ကယခုတွေ့ရှိချက်သည် OSU6162 သည်အရက်သေစာမှီခိုသောလူနာများအတွက်အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းနှင့်အရက်သေစာမှီဝဲသောလူနာများ (ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနအဖွဲ့မှထုတ်ဝေခြင်းမရှိသေးသောတွေ့ရှိချက်များ) နှင့်ဒြပ်ပေါင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုပြသသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်လူ့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုနှင့်အတူတွေ့ရှိချက်များ ပရိုဖိုင်းကို (Johansson et al. 2012; Kloberg et al. 2014AUD လူနာများအတွက်အရက်အသုံးပြုမှုကိုလျော့ချရန် OSU6162 ၏လက်တွေ့ထိရောက်မှုကိုထပ်မံအကဲဖြတ်သင့်သည်။
Gothenburg တက္ကသိုလ်၊ Sahlgrenska အကယ်ဒမီ၊ ဒေါက်တာ Arvid Carlsson သည် (Pfizer Pharmaceuticals, Inc မှ Dr. Arvid Carlsson မှရရှိသော) OSU6162 ၏လှူဒါန်းမှုအတွက်၊ ကျေးဇူးတင်လွှာနှင့်ပတ်သက်သည့်တန်ဖိုးရှိသောမှတ်ချက်များနှင့်လက်ရှိတင်ပြသောရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ဆွေးနွေးမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည့် Monica Aronsson၊ Linnea Tankred နှင့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများ Weinni Mussie၊ Carolina Bengtsson-Gonzales နှင့် Mohammed Elhassan တို့သည်စမ်းသပ်မှုများ၌ကောင်းမွန်သောအကူအညီများအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤလေ့လာမှုကိုဆွီဒင်သုတေသနကောင်စီ (2009-2612)၊ Karolinska Institutet ၏သုတေသနရန်ပုံငွေ၊ ဆွီဒင်အရက်လက်လီလက်လီလက်ဝါးကြီးအုပ်မှုသုတေသနကောင်စီ (FO2012-0053)၊ Torsten Söderberg Foundation (M203 / 12)၊ ဆွီဒင် ဦး နှောက်ဖောင်ဒေးရှင်းမှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ FO2011-0106, FO2012-0083 နှင့် FO2013-0042) နှင့်ဆွီဒင်ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုနှင့်လူမှုဖူလုံရေး (2013–1781) အတွက် PS သို့ PS
အကျိုးစီးပွားများထုတ်ဖော် / ပဋိပက္ခ
စာရေးသူအဘယ်သူအားမျှမဆိုပြီးတော့ biomedical ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများကြေညာ။
စာရေးဆရာများဒီဇိုင်း KF, BS နှင့် PS, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် microdualysis စမ်းသပ်မှုများမှဒေတာများအနက်။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ KF နှင့် PS, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်မဟုတ်သလိုစမ်းသပ်မှုများမှဒေတာများအနက်။ KF အဆိုပါ microdialysis နှင့်မဟုတ်သလိုစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ IF နဲ့ PS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဒီဇိုင်းနှင့်အချက်အလက်များကို CPP ကစမ်းသပ်ချက်ဘတ်ပါ၏။ IF နှင့်မဂ္ဂါဝပ်သည့်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ KF, IF နဲ့ PS လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပထမမူကြမ်းကရေးသားခဲ့သည်။ အားလုံးစာရေးဆရာများမှလှူဒါန်းခဲ့နှင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏နောက်ဆုံး version ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Anton RF , O'Malley အက်စ်အက်စ် , Ciraulo DA , Cisler RA , Couper: D , ဒိုနိုဗန် DM , Gastfriend DR , Hosking JD , ဂျွန်ဆင် BA ဘွဲ့ , LoCastro JS , Longabaugh R ကို , Mason ဆို BJ , Mattson ME , Miller က WR , Pettinati HM , Randall CL , ဆွစ်ဖ် R ကို , Weiss RD , Williams က ld , Zweben တစ်ဦးက , Group မှ CSR ( 2006 ) အဆိုပါပေါင်းစပ်လေ့လာမှု: တစ် randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေးအရက်မှီခိုဘို့ပေါင်းလိုက်သော pharmacotherapies နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကြားဝင် . ဂျေအေအမ်အေ 295 : 2003 - 2017 .
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 701
ဗာရက်ကို S , Carnicella S က , Yowell QV , Ron: D ( 2011 ) အရက်အကျိုးသည်သက်ရောက်မှုတွေနဲ့ရှာကြံ: Glial ဆဲလ်လိုင်း-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်အဆိုပါ mesolimbic dopaminergic စနစ်၏အရက်-သွေးဆောင် allostasis နောက်ကြောင်းပြန် . အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်: အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏တရားဝင်ဂျာနယ် 31 : 9885 - 9894 .
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 23
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 8
ဘေ့စအီး , Grinevich VP , Gioia: D , နေ့-Brown က JD , ဘိုနင် KD , Stuber GD , Weiner JL , Budygin EA ၏ ( 2013 ) VTA dopamine အာရုံခံ၏ Optogenetic ဆွ dopamine ဂီယာ၏လုပ်သူများပေမယ် phasic မဟုတ်ပုံစံများအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုလျော့ချကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ . အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်နယ်စပ်ဒေသ7: 173 .
Becker က HC , Mulholland PJ ( 2014 ) အရက်ဆုတ်ခွာ၏ Neurochemical ယန္တရားများ . Handb Clin Neurol 125 : 133 - 156 .
Boileau ငါ , Assaad JM , Pihl ro , Benkelfat ကို C , Leyton M က , Diksic M က , Tremblay RE , Dagher တစ်ဦးက ( 2003 ) အရက်လူ့နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အားပေးအားမြှောက် . synapses 49 : 226 - 231 .
တိုက်ရိုက် Link ကို:
PDF ဖိုင် (162K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 209
Brunetti M က , di Tizio L ကို , Dezi S က , Pozzi, G , Grandinetti P ကို , Martinotti, G ( 2012 ) Aripiprazole, အရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ် . EUR ဗြာ Med Pharmacol သိပ္ပံ 16 : 1346 - 1354 .
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 9
Budygin EA ၏ , ယောဟနျသအဒေီ , Mateo Y ကို , Daunais JB , Friedman DP , Grant က ka , ဂျုံးစ် SR ( 2003 ) နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မျောက်များ၏ striatum အတွက် presynaptic dopamine function ကိုပွောငျးလဲ: တစ်ပဏာမလေ့လာမှု . synapses 50 : 266 - 268 .
PDF ဖိုင် (59K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 28
Carlsson ML , Carlsson တစ်ဦးက , Nilsson M က ( 2004 ) Schizophrenia: dopamine ကနေအချိုမှုများနှင့်နောက်ကျောမှ . Curr Med Chem 11 : 267 - 277 .
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 94
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 124
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 1
Carlsson ML , Burstein ES , Kloberg တစ်ဦးက , Hansson က S , Schedwin တစ်ဦးက , Nilsson M က , တဘက်တချက် JP , Carlsson တစ်ဦးက ( 2011 ) 6162-HT6162A serotonin receptors အပေါ် OSU5 - (-) - OSU2 နှင့် (+) ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist သက်ရောက်မှုများအတွက် Vivo သက်သေအထောက်အထားခုနှစ်တွင်ဗြဲ . J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm 118 : 1511 - 1522 .
Carnicella S က , Ron: D , ဗာရက်ကို S ( 2014 ) အရက်အလွဲသုံးစားမှုတစ် preclinical မော်ဒယ်အဖြစ်ကြွက်များတွင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအီသနော access ကိုအချိန်ဇယား . အရက် 48 : 243 - 252 .
Cunningham CL , Gremel CM , Groblewski PA ဆိုပြီး ( 2006 ) ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကိုနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက် . နတ် Protoc 1 : 1662 - 1670 .
di Chiara, G , Imperato တစ်ဦးက ( 1988 ) လူသားမြားသဖွငျ့စော်ကားမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျား၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့် . proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 85 : 5274 - 5278 .
ဒိုင်ယာနာ M က ( 2011 ) အဆိုပါ dopamine မူးယစ်ဆေးစွဲ၏အယူအဆနှင့်၎င်း၏အလားအလာကုထုံးတန်ဖိုးကို . တပ်ဦး Psychiatric2: 64 .
Fredriksson ငါ , Jayaram-Lindstrom N ကို , Wirf M က , Nylander E ကို , Nystrom E ကို , Jardemark K သည် , Steensland P ကို ( 2015 ) အမူအကျင့်များနှင့် electrophysiological တွေ့ရှိချက်: ရေရှည်သောက်သုံးကြွက်များတွင်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းရောဂါများအတွက်အလားအလာဆေးဝါးအဖြစ် guanfacine ၏အကဲဖြတ် . Neuropsychopharmacology 40 : 1130 - 1140 .
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို ( 2000 ) အဆိုပါအရက်ကိုနားလည်ဘို့ dopamine စနစ်ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်၎င်း၏ဂယက်များလုပ်သူများ / phasic မော်ဒယ်နှင့် psychostimulant တဏှာ . စှဲမွဲမှု 95 : S119 - 128 .
PDF ဖိုင် (175K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 130
Heinz တစ်ဦးက , Siessmeier T က , Wrase J ကို , Hermann: D , Klein က S , Grusser သည် SM , flor H ကို , Braus DF , Buchholz HG , Grunder, G , Schreckenberger M က , Smolka MN , Rosch က F , မန်း K သည် , Bartenstein P ကို ( 2004 ) dopamine: D (2) အကြားဆက်စပ်မှုဟာ ventral striatum နှင့်အရက်တွေကိုဗဟိုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်တဏှာအတွက် receptors . နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 161 : 1783 - 1789 .
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 257
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 148
Hietala J ကို , အနောက်ကို C , Syvalahti E ကို , Nagren K သည် , Lehikoinen P ကို , Sonninen P ကို , Ruotsalainen ဦး ( 1994 ) ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစညျး Striatal D2 dopamine အဲဒီ receptor Vivo အတွက် အရက်မှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက် . Psychopharmacology (Berl) 116 : 285 - 290 .
Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ , Chang SJ , Sparta DR , Bower က MS , Bonci တစ်ဦးက ( 2010 ) အရက်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးလအတွင်း3မှ4ပြီးနောက်ကွီနိုင်မသမာသောခံနိုင်ရည်ဖြစ်လာ . အရက် Clin Exp Res 34 : 1565 - 1573 .
အပြည့်အဝအပိုဒ် (HTML) ကို
PDF ဖိုင် (690K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 36
Jerlhag E ကို , Egecioglu E ကို , Landgren S က , ရှာလုံ N ကို , Heilig M က , Moechars: D , Datta R ကို , Perrissoud: D , Dickson SL , အိန်ဂျယ်ဂျေအေ ( 2009 ) အရက်ဆုလာဘ်ဘို့အချက်ပြအလယ်ပိုင်း ghrelin ၏လိုအပ်ချက် . proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 106 : 11318 - 11323 .
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 141,
Johansson B ကို , Carlsson တစ်ဦးက , Carlsson ML , Karlsson M က , Nilsson MKL , Nordquist-Brandt E ကို , Rönnbäck L ကို ( 2012 ) (-) - ပု monoaminergic stabilizer ၏ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled Cross-ကျော်လေ့လာမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်အတွင်းရှိ OSU6162 လေဖြတ်သို့မဟုတ်စိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာအောက်ပါ . Acta Neuropsychiatrica 24 : 266 - 274 .
PDF ဖိုင် (742K)
Jonsson S က , Ericson M က , Soderpalm B ကို ( 2014 ) ကျိုးနွံရေရှည်အီသနောစားသုံးမှုကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် neurotransmitter အဲဒီ receptor မျိုးဗီဇ၏စကားရပ်အပေါ်သက်ရောက်မှု . အရက် Clin Exp Res 38 : 722 - 729 .
PDF ဖိုင် (722K)
Joos L ကို , Goudriaan AE , Schmaal L ကို , Fransen E ကို , ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး W က , Sabbe BG , Dom, G ( 2013 ) အရက်မှီခိုလူနာ Impulse နှင့် relapse အပေါ် modafinil ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး . ဥရောပ Neuropsychopharmacology: Neuropsychopharmacology ရဲ့ဥရောပကောလိပ်များ၏ဂျာနယ် 23 : 948 - 955 .
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 10
Kara-E ကို , Lin က H ကို , Svensson K သည် , Johansson AM , ထူးဆန်းတဲ့ PG ( 2010 ) ဝတ္ထု dopamine အဲဒီ receptor-ညွှန်ကြားဒြပ်ပေါင်းများအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (Sအဆိုပါ D6162 dopamine အဲဒီ receptor မှာ) -OSU16 နှင့် ACR2 . br J ကို Pharmacol 161 : 1343 - 1350 .
PDF ဖိုင် (598K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 13
Karami က M , Zarrindast MR ( 2008 ) မော်ဖင်းအကိုက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Wistar ကြွက်များတွင်လိင်-ရသည်သွေးဆောင်ရာအရပျအေးစက် . EUR J ကို Pharmacol 582 : 78 - 87 .
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 2,
Karkhanis AN , နှင်းဆီ JH , Huggins KN , Konstantopoulos JK , ဂျုံးစ် SR ( 2015 ) နာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအီသနောထိတွေ့ mouse ကိုနျူကလိယ accumbens အတွက် presynaptic dopamine neurotransmission လျော့ကျစေပါတယ် . မူးယစ်ဆေးအရက်ပြုမှ 150 : 24 - 30 .
Kloberg တစ်ဦးက , Constantinescu R ကို , Nilsson MK , Carlsson ML , Carlsson တစ်ဦးက , Wahlstrom J ကို , Haghighi S က ( 2014 ) Huntington ရောဂါရှိသည့် monoaminergic တည်ငြိမ်မှု၏ခံနိုင်ရည်နှင့်ထိရောက်မှု (-) - OSU6162 (PNU-96391A) - မျက်မမြင်နှစ်ဖက်စလုံးလေ့လာမှု . Acta Neuropsychiatrica ။ Officieel Wetenschappelijk Orgaan ဗန် Het IGBP (Interdisciplinair Genootschap voor Biologische Psychiatry) 26 : 298 - 306 .
Kumakura Y ကို , Gjedde တစ်ဦးက , Caprioli: D , Kienast T က , Beck တစ်ဦးက , Plotkin M က , Schlagenhauf က F , Vernaleken ငါ , Grunder, G , Bartenstein P ကို , Heinz တစ်ဦးက , Cumming P ကို ( 2013 ) detoxified အရက်သမားလူနာ caudate နျူကလိယအတွက် dopamine ၏တိုးမြှင့်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် . PLoS တစ်ခုမှာ 8 e73903 :.
Lido နာရီ , Stomberg R ကို , Fagerberg တစ်ဦးက , Ericson M က , Soderpalm B ကို ( 2009 ) inhibitor org 25935 ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် Basal နှင့်အီသနော-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်အဆိုပါ glycine reuptake . အရက် Clin Exp Res 33 : 1151 - 1157 .
PDF ဖိုင် (436K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 22
Litten RZ , ရိုင်ယန် ML , Fertig JB , Falk DE , Johnson က B ကို , Dunn Ke , အစိမ်းရောင် AI အ , Pettinati HM , Ciraulo DA , Sarid-Segal အို , Kampman K သည် , အနက်ရောင်ဆံရှင်မ MF , strain EC , Tiouririne NA , ရွေးနုတ်ဖိုး J ကို , Scott ကို C , ရဲရငျ့စှာပွော R ကို , Group မှ NS ( 2013 ) အရက်မှီခိုဘို့ varenicline tartrate များ၏ထိရောက်မှုအကဲဖြတ်တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး . J ကိုစွဲ Med7: 277 - 286 .
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 32
Science®၏ Web ကို
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 187
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 40
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 784
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 21
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 140
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 17
Malmlöf T က , Feltmann K သည် , Konradsson-Geuken တစ်ဦးက , Schneider က F , Alken RG , Svensson TH , Schilstrom B ကို ( 2015 ) deuterium-အစားထိုး lပါကင်ဆန်ရောဂါ၏မော်ဒယ်လ်တွင် -DOPA အနေဖြင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွမ်းရည်နှင့် dopamine ထွက်ရှိမှုကိုဖော်ပြသည်။ l-DOPA နှင့်တစ်ဦး Mao-B က inhibitor . J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm 122 : 259 - 272 .
Martinez: D , gil R ကို , Slifstein M က , ဟွမ် DR , Huang က Y ကို , ဖာရတစ်ဦးက , Kegeles L ကို , Talbot P ကို , အီဗန်က S , Krystal J ကို , Laruelle M က , ဗြ Dargham တစ်ဦးက ( 2005 ) အရက်မှီခိုအဆိုပါ ventral striatum အတွက်တုံး dopamine ဂီယာနှင့်ဆက်စပ်သည် . Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 58 : 779 - 786 .
Natesan S က , Svensson ka , မဆင်မခြင် GE , Nobrega ဖြစ်မှု , Barlow KB , Johansson AM , Kapur S က ( 2006 ) အဆိုပါ dopamine stabilizer (S) - (-) - (3-methanesulfonylphenyl) -1-propyl-piperidine [(-) - OSU6162] နှင့် 4- (3-methanesulfonylphenyl) -1-propyl-piperidine (ACR16) မွငျ့မားကိုပြသ Vivo အတွက် D2 အဲဒီ receptor ထေို, antipsychotic ကဲ့သို့ထိရောက်မှု, နှင့်ကြွက်များတွင်မော်တာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဘို့အနိမ့်အလားအလာ . J ကို Pharmacol Exp Ther 318 : 810 - 818 .
Nilsson MK , Carlsson ML ( 2013 ) အဆိုပါ monoaminergic stabilizer (-) - OSU6162 နှောင့်နှေး-မှီခိုသဘာဝကမေ့နောက်ကြောင်းပြန်နှင့်ကြွက်များတွင် scopolamine အားဖြင့်သွေးဆောင်မှတ်ဉာဏ်ချွတ်ယွင်းတိုးတက်ကောင်းမွန် . Neuropharmacology 75 : 399 - 406 .
Rehm J ကို , Mathers ကို C , Popova S က , Thavorncharoensap M က , Teerawattananon Y ကို , Patra J ကို ( 2009 ) ရောဂါနှင့်ဒဏ်ရာနှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့်အရက်သုံးမမှန်ဖို့တွေကပေါ်ကနေစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး . ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 373 : 2223 - 2233 .
တဘက်တချက် JP , တဘက်တချက်, E , Helgeson L ကို , Johansson AM , Svensson K သည် , Carlsson တစ်ဦးက , Carlsson ML ( 2008 ) (-) - ၏ဆိုးကျိုးများ OSU6162 နှင့် ACR16 ကြွက်များတွင်မော်တာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်, dopaminergic တည်ငြိမ်တစ်မူထူးခြားတဲ့ယန္တရားကိုညွှန်း . J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm 115 : 899 - 908 .
Schilström B ကို , Nomikos GG , Nisell M က , Hertel P ကို , Svensson TH ( 1998 ) N-methyl-dအဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ -aspartate အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်စနစ်တကျနီကိုတင်း-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်မှေးမှိန် . neuroscience 82 : 781 - 789 .
Seeman P ကို , ဂွမ် HC ( 2007 ) ၏ Dopamine တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist အရေးယူမှု (-) OSU6162 စိတ္တအတွက် dopamine hyperactivity နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် . EUR J ကို Pharmacol 557 : 151 - 153 .
Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်းဂျေအေ , Steensland P ကို , မက်ဒီနာခ , Abernathy Ke , Chandler LJ , ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု R ကို , Bartlett အရှေ့တောင် ( 2008 ) 20% အီသနောမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို Long-အီဗန်နှင့် Wistar ကြွက်များတွင်မြင့်မားသောအီသနောစားသုံးမှု induces . အရက် Clin Exp Res 32 : 1816 - 1823 .
PDF ဖိုင် (671K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 132
Sonesson ကို C , Lin က CH , Hansson L ကို , ရေကို N ကို , Svensson K သည် , Carlsson တစ်ဦးက , Smith ကမီဂါဝပ် , Wikstrom H ကို ( 1994 ) ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ-လှုပ်ရှားမှုဆက်ဆံရေး: ဦးစားပေး dopamine autoreceptor ရန်အဖြစ် (S) မ -phenylpiperidines နှင့်တင်းကျပ် congeners အစားထိုး . J ကို Med Chem 37 : 2735 - 2753 .
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 76
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 175,
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 126
Steensland P ကို , Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်းဂျေအေ , Holgate J ကို , Richards JK , Bartlett အရှေ့တောင် ( 2007 ) Varenicline တစ်ခု alpha4beta2 နီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist, ရွေးချယ်အီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ရှာကြံ . proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 104 : 12518 - 12523 .
Steensland P ကို , Fredriksson ငါ , Holst S က , Feltmann K သည် , Franck J ကို , Schilstrom B ကို , Carlsson တစ်ဦးက ( 2012 ) အဆိုပါ monoamine stabilizer (-) - OSU6162 နျူကလိယ accumbens အတွက်မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုနှင့်အီသနော-သွေးဆောင် dopamine output ကို attenuates . Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 72 : 823 - 831 .
ဆွစ်ဖ် R ကို ( 2010 ) အရက်လူနာကုသမှုထဲမှာ dopaminergic system ပေါ်တွင်သရုပ်ဆောင်ဆေးဝါးများ . Curr Pharm Des 16 : 2136 - 2140 .
Tolboom N ကို , Berendse HW , Leysen je , Yaqub M က , ဗန် Berckel BN , Schuit RC , Ponsen MM , Bakker E ကို , Hoetjes NJ , Windhorst အေဒီ , Carlsson ML , Lammertsma AA ကို , Carlsson တစ်ဦးက ( 2015 ) အဆိုပါ dopamine stabilizer (-) - OSU6162 striatal dopamine D2 / D3 receptors တစ် subpopulation ယူထားသော: ကျန်းမာလူ့ဘာသာရပ်များအတွက် [ကို C] raclopride ပေလေ့လာမှု . Neuropsychopharmacology 40 : 472 - 479 .
Tupala E ကို , Tiihonen J ကို ( 2004 ) Dopamine နှင့်အရက်: အီသနောအလွဲသုံးစားမှု neurobiological အခြေခံ . prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 28 : 1221 - 1247 .
Tzschentke TM ( 2007 ) ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်၏ update ကို: အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကို (CPP က) ပါရာဒိုင်းနှင့်အတူဆုလာဘ်တိုင်းတာခြင်း . စှဲလမျးသူ Biol 12 : 227 - 462 .
PDF ဖိုင် (1289K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 500
Volkow ND , Swanson JM ( 2003 ) ADHD ရဲ့ကုသမှု methylphenidate ၏လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုကိုထိခိုက်ကြောင်း Variables ကို . နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 160 : 1909 - 1918 .
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 218
Volkow ND , ဝမ် GJ , မုဆိုး JS , Logan J ကို , Hitzemann R ကို , ding YS , Pappas N ကို , Shea ကို C , Piscani K သည် ( 1996 ) အရက်သမားအတွက် dopamine receptors အတွက်မဟုတ် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လျော့နည်းစေ . အရက် Clin Exp Res 20 : 1594 - 1598 .
PDF ဖိုင် (1073K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 251
Volkow ND , ဝမ် GJ , Telang က F , မုဆိုး JS , Logan J ကို , ဂြနျေး M က , ma Y ကို , Pradhan K သည် , Wong ကကို C ( 2007 ) detoxified အရက်သမားအတွက် striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လေးနက်လျှောက်လျော့နည်း: ဖြစ်နိုင်သော orbitofrontal ပါဝင်ပတ်သက်မှု . အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်: အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏တရားဝင်ဂျာနယ် 27 : 12700 - 12706 .
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 151
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 262
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 146
Weiss က F , Parsons LH , Schulteis, G , Hyytia P ကို , Lorang MT , Bloom FE , Koob gf ( 1996 ) အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှီခိုကြွက်များတွင် accumbal dopamine နဲ့ 5-hydroxytryptamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ဆုတ်ခွာ-ဆက်စပ်ချို့တဲ့ restores . neuroscience ၏ဂျာနယ်: အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် Society ၏တရားဝင်ဂျာနယ် 16 : 3474 - 3485 .
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ( 1973 ) အမျိုးမျိုးသောအချိန်ဇယားအပေါ်အီသနောထိတွေ့အောက်ပါကြွက်များတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှု . Psychopharmacologia 29 : 203 - 210 .